Abantu abakwiIzmir babaleka ngokuchasene nexesha emva kwenyikima
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » Abantu abakwiIzmir babaleka ngokuchasene nexesha emva kwenyikima
Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
Kumfanekiso obekiweyo useto olugqibeleleyo lokhenketho eIzmir, eTurkey ngaphezulu kwabantu abangama-2,000 900 baya kuchitha ubusuku obunye ezintenteni. Abaninzi boyika ukubuyela emakhayeni abo njengoko inyikima iqhubeka, ngaphezulu kwama-7.0 abhalwe kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo. Izikolo ezidolophini nazo zizakuvalwa kwiveki ezayo. Lo mmandla wabethwa yinyikima eyatshabalalisayo eyi-64 kwasekuseni ngoLwesihlanu. Le nyikima yabulala abantu abangama-900 yaza yalimala ngaphezulu kwama-XNUMX
E-Izmir, abahlanguli baseTurkey babaleka ngokuchasene nexesha lokufikelela abasindileyo ababanjiwe phantsi kwengqushu kwiibhloko zezindlu ezisibhozo ezahlukeneyo. Uninzi lwabantu alukaziwa, iiarhente zalapha zithi, kunye neentsapho ziqokelelene kwizakhiwo ezonakeleyo ngeCawa, ngethemba lokufumana abo babathandayo.
Izakhiwo ezingama-XNUMX zidweliswe njengezonakaliswe kakhulu. Umongameli wase-Turkey u-Recep Tayyip Erdogan wathembisa "ukuphilisa amanxeba" ngaphambi kokuba kufike ubusika.
Indawo yokuma kwenyikima ibibekwe kuLwandle iAegean, malunga neekhilomitha ezili-10 kunxweme lwaseTurkey. Owona monakalo mkhulu wenzekile eIzmir, kodwa abakwishumi elivisayo ababini abakwisiqithi saseGrisi iSamos nabo babulawa.
Itsunami encinci izele zizitalato zedolophu yaseSeferihisar kunxweme lwaseTurkey, yabulala umfazi kwisitulo esinamavili, ingxelo yemithombo yeendaba yasekuhlaleni.
Umphathiswa wezeMpilo uFahrettin Koca uthe uyabuqonda ubunzima bokuziqhelanisa nentlalontle kwiintente ezixineneyo okanye kwamanye amaziko oncedo okwexeshana, kodwa ulumkisile ngesoyikiso se-coronavirus.